Nepali Christian Bible Study Resources - पैसा! पैसा!
» तपाईंको पहिलो खाँचो » पैसा! पैसा!
कुनै मानिसले पैसा कमाउनको निम्ति परिश्रम गर्दछ भने अरूले पैसा सजिलो प्रकारले पाउने बाटो हेर्दछन्। कतिले लटरीमा गोला हालेर वा अन्य तरिकाहरूले एकैचोटि धेरै पैसा प्राप्‍त गर्ने आशा गर्छन्। कतिले 'सोझो औंलाले घिउ आउँदैन' भन्छन् र अरूलाई ठग्छन् वा छल गरेर अरूको सम्पत्तिमा हात हाल्छन्। यसरी नै धनी हुन खोज्नेहरू अति धेरै भइसके। यसले गर्दा पैसा कमाउने बाटो यही हो भन्ने विचार प्रायः सबैको हुन्छ। कुन शहर, कुन बजार, वा कुन गाउँ र बस्तीमा चोर लाग्दैन? डकैती र हत्याको बारेमा हामी घरीघरी सुन्दछौं। संसारमा जिउन हामीलाई डर लागेको छ। यस्तो किन भएको छ? के पैसाको खातिर होइन र? मानिसको निम्ति पैसा सबभन्दा मुख्य चीज भएको छ। पैसाको लागि मानिस जे पनि गर्न तयार छ। पैसा कमाउनका लागि मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर हिँड्छन्; पैसा पछि लागेर मानिसहरू आफ्नो शरीर र आत्मा बेच्छन्। पैसा कस्तो चीज हुँदो रहेछ! हामी छक्कै पर्दछौं।
"रुपियाँ-पैसाको प्रेमचाहिँ सबै खराबीको जरा हो। यसको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भड्किएका छन् र आफैलाई अनेकौं पीडाले छेंड-छेंड पारेका छन्" (१ तिमोथी ६:१०)।
"तर धनी हुन खोज्नेहरू (पापमय) परीक्षा र पासोमा पर्छन्, साथै धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फँस्दछन्; तिनैले मानिसहरूलाई बरबादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्" (१ तिमोथी ६:९)।
पैसा चाहिन्छ नै, तर धनी हुन खोज्नु खतरा हो, किनकि धनको खोजमा लाग्नेहरूको मनमा पापका अनगिन्ती अभिलाषाहरू जाग्दछन्। उनीहरू कहिल्यै सन्तुष्ट रहन सक्दैनन्। उनीहरूलाई यो चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ; सबै थोक चाहिन्छ। यस्तो गर्दा गर्दै उनीहरू कता पुग्छन् भन्ने कुरा तपाईं याद गर्नुहोला -- यस्तो हानि कसले भोग्न चाहन्छ र? यसैकारण होशियार हुनुहोस्, प्रिय मित्र, होशियार!
"तर सन्तुष्टतासिको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। किनभने हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएका छैनौं; अनि यो निश्चित छ, हामी केही लैजान सक्दैनौं। खानु र लाउनु छ भने हामी यसैमा सन्तुष्ट रहौं" (१ तिमोथी ६:६-८)।
हाम्रो भरोसा हामीले एकमात्र साँचो जिउँदो परमेश्वरमाथि राख्‍नुपर्थ्यो। उहाँको भक्ति हामीले गर्नुपर्थ्यो। तर हाम्रो ध्यान त पैसामा पो गएको छ। हामीले केही ल्याएनौं र केही लैजान पाउँदैनौं भन्ने कुरा भुलेका छौं कि? खाना र लाउनुमा को सन्तुष्ट रहन चाहन्छ? परमेश?वरको भक्ति गर्नुमा कसले ठूलो लाभ देखेको छ?
"मैले आँसु नखसाली सुतेको कुनै रात नै छैन। जब म आफ्नो भविष्य, प्रेम, जीवन, मृत्यु, आफन्त र विगतलाई विचार गर्छु, आँसुहरू आफै बर्रर झर्न थाल्छन्। म आफ्नो टाउकोलाई सिरकले छोप्छु र सुत्‍न कोशिश गर्छु। तर म सक्दै सक्दिनँ। तपाईंलाई थाहा छ, म ईश्वरलाई एउटा कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु, त्यो हो, "हरेक नै मर्नैपर्छ।" यदि ईश्वरले मृत्यु नबनाएको भए यी स्वार्थी र क्रूर मानवजातिले के गर्ने थिए होलान्? तिनीहरूलाई थाहा छ, कुनै दिन तिनीहरू मर्नेछन् र पनि तिनीहरू अझै धरै धेरै पैसा कमाउनको लागि दौडिरहेका छन्।
म काठमाडौंमा हुँदा मैले केही असल मित्रहरूलाई भेटेको थिएँ। तिनीहरू अमेरिकन सेन्टरमा टोफल तयारीको लागि गएका थिए। मैले तिनीहरूलाई किन तपाईंहरू त्यहाँ जानुहुन्छ भनी सोधें। तिनीहरूको जवाफ सरल थियो, "अमेरिका"। मैले सोधें, त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ? तिनीहरूले जवाफ दिए, "पैसा"। त्यसपछि मैले प्रेम र ईश्वरको बारेमा सोधें, "के तपाईं अमेरिकामा शान्ति र सन्तुष्टिको जीवन पाउनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ?" तिनीहरूले भने, "सायद, पाउँछु होला"। मैले तिनीहरूलाई सोधें, "नेपालमा उदाउने सूर्य र तारा, अमेरिकाको पनि त्यही होइन र? यहाँ देखिने आकाश त्यहाँ पनि उस्तै होइन र?" मैले तिनीहरूलाई विश्वस्तसाथ आफ्नो भित्र हृदयमा शान्ति पाउन कोशिश गर्न अनुरोध गरें। अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा आँखै नहेरी कुद्‍नाले तपाईंलाई झन् धेरै अन्धा बनाउँछ।
एउटा कुरा मैले के भेट्टाएँ भने तिनीहरू जो विदेश जान कोशिश गर्छन्, तिनीहरू गरिब परिवारबाटका होइनन् तर धनी र सम्पन्न परिवारहरूबाटका हुन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यी व्यक्तिहरू बाहिर जानुमा कुनै कारण नै छैन। तिनीहरूसँग पैसा, खानदानी घर र सम्पन्न परिवार छ। सबै नै आफ्नो अन्धो र दोधारे जीवन बिताइरहेका छन्। कसैलाई थाहा छैन अमेरिका वा अरू देशमा तिनीहरूले के चाहन्छन्? वास्तविकरूफमा कसैलाई थाहा छैन कुन कुराले तिनीहरूलाई खुसी बनाइरहनसक्छ? तिनीहरू खाली जान, जान, जान मात्र चाहन्छन्।"
"पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, तब यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्" (मत्ती ६:३३)।
"परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न त तिनीहरूको चाँदीले न तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्दछ" (सपन्याह १:१८)।
"आफ्नो धनसम्पत्तिमा भरोसा गर्नेहरू र आफ्नो धनको प्रशस्ततामा अहङ्कार गर्नेहरूमध्ये कसैले पनि कुनै रीतिले आफ्नो भाइलाई मोल तिरेर छुटाउन सक्दैन, न त्यसको छुटकाराको दाम परमेश्वरलाई दिन सक्छ; किनभने तिनीहरूको प्राणको दाम ज्यादै छ र त्यो कहिल्यै पुग्दैन" (भजनसङ्ग्रह ४९:६-८)।
"किनभने सारा संसार प्राप्‍त गरे तापनि मानिसले आफ्नो प्राणलाई चाहिँ गुमायो भने उसलाई के फाइदा भयो? अथवा आफ्नो प्राणको सट्टामा मानिसले के देला?" (मत्ती १६:२६)
« विकास! विकास! नाश हुने विकास??
के मान्छे बाँदरबाट आएको हो? »